Miatrika Fandravana ny Teatram-panjakan’i Hong Kong Taorian’ny Ady Lehibe Faharoa Ao Hong Kong · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Oktobra 2016 16:28 GMT
Sary torohay iray momba ny lanja ara-tantara, kolotsaina sy hairafitrano ao amin'ny Teatram-panjakana. Avy amin'ny sehatra fanangonan-tsonia Supporthk.org
Tsy manana firy amin'ny teatra tavela taorian'ny Ady Lehibe Faharoa i Hong Kong, tanàna izay voalohany nalaza eran-tany noho ny sarimihetsiny, ary ankehitriny eo ambony fitetehana hena ilay antitra indrindra ao amin'ny nosin'i Hong Kong. Mety hanome ny toerana ho anà tetikasa iray hafa fampandrosoana ny tilikambom-pandraharahana ny Teatram-panjakana, izay nisokatra tamin'ny 1952, toy ny nangatahan'ny Biraon'ny governamanta miahy ny Rakitry ny Ela sy ireo Tsangambato tamin'ny volana Aprily 2016 mba hampidinana kilasy ambany kokoa an'ilay tranobe manantantara, izay jiro maitso ara-bakiteny ho amin'ny fandravana azy.
I Harry Odell no nanorina ny Teatram-panjakana, impresario voalohany tao Hong Kong izay nanomboka ny fandraharahàna sarimihetsika tany Hong Kong, nandresy lahatra ireo mpanakanto malaza mba hitsidika tany ary nahavita nandresy lahatra ny governemanta mba hanohana ny fampandrosoana ara-kolontsaina, izany hoe ny fananganana ny tranoben'ny teatra ao amin'ny Lapan'ny Tanàna tamin'ny taona 1960.
Natsangana ho mari-pamantarana ara-kolotsaina ho an'ireo fampisehoana mozika sy teatra goavana ilay tetikasa manokan'i Odell, ny Teatram-panjakana. Tamin'izany andro izany, nanasongadina ny asa teo an-toerana sy ny tany ivelany miainga amin'ny fampisehoana tantara tandrefana, fampisehoana hira Pop Mandarina sy opera Kantonezy an'ireo Mandarina malaza sy sarimihetsika Kantonezy. Nanambara ny fiakaran'ny trano fijerena sarimihetsika tao Hong Kong tamin'ny vanimpotoana taorian'ny Ady Lehibe Faharoa ilay teatra, ary nahita ny fandrosoan'ny kolontsaina maha-mponina ao Hong Kong nandritra ireo andro mamin'ny taona 1970 sy 1980.
Ny rafitry ny tafon'ny teatra tsy manam-paharoa, miaraka amina tafo parabolika vita avy amin'ny vatosokay, dia tena noderain'ireo vondrona fiarovana maritrano ho toy ny ohatra amin'ny Hetsika maritrano Maoderina.
Raha tonga tany amin'ny faran'ny taona 1990 ny vanimpotoam-bolamenan'ny trano fijerena sarimihetsika ao Hong Kong, nijanona niasa ilay teatra tamin'ny 1997 ary navadika ho toeram-pivarotana sy Klioban'ny snooker (mpilalao billard) tamin'ny taona 2000. Fa na ny rafitra ivelany na ny anatiny dia mbola tsy simba. Ao amina fanambarana iraisana, manamafy ny vondrona fiarovana eo an-toerana:
Ny rafitra tsy manam-paharoan'ny tafon'ny tilikambon'ny Teatram-panjakana taloha mitatao amin'ny Lalan'ny Mpanjaka mitovy amina zavakanto lehibe napetraka amin'ny toerana ankalamanjana. Kisary iray tena miavaka ao amin'ny tanàn-dehiben'i Hong Kong, misambotra ny fahazotoana tamin'ny vanimpotoana taloha, ary tsy misy antony tsy hampety ny haha-eo am-pelatanan'ny ho avy azy ihany koa. Tsy iadiana hevitra ny maritranon'ny vatosoa na eo an-toerana, na manerana izao tontolo izao, raha toa ka afaka avadika an'eritreritra ity zavamahagaga taorian'ny Ady Lehibe Faharoa ity, azo antoka fa manana ny fahafahana hivoatra ho fanasongadinana ny fizahantany sy mari-pamantarana ara-kolotsaina izay mba afaka hireharehan'ny vahoaka ao Hong kong. Tokony mahafantatra ny misy ny hery malefaka ananany izay rehetra tanàna mahay mametraka ny hajany.
Na izany aza, tamin'ny volana Aprily, andianà mpikambana dimy avy amin'ny Biraon'ny Rakitry ny Ela sy ny Tsangambato no nanolo-kevitra ny hanome grady fahatelo ilay tranobe mifototra amin'ny taonany fotsiny. Fandaharana toy izany no ambany indrindra ao amin'ny rafitra fanasokajiana, izay manome làlana ny fandravana azy raha tsy azo atao ny fiarovana. Nanome tatitra ireo media teo an-toerana fa efa novidiana mpamokatra lozisiely eo an-toerana ny tranobe fipetrahana taloha manodidina ilay teatra, izay mikendry ny hanitatra ny faritra ho lasa distrikana trano fonenana sy fanaovana raharaham-barotra; ho lasa tilikambo roa fivarotana ilay Teatram-panjakana, araka ny drafitra fampandrosoana.
Tranoben'ny Teatram-panjakana manamorona ny Lalan'ny Mpanjakana tamin'ny 2013. Raha manarona ny ankamaroan'ny eo anoloan'ny tranobe ny takelaka iray, ireo mbola hita ireo ny endriky ny tafo manokana. Sary avy amin'i Skiawems. CC BY-SA 3.0
Nisy fanangonan-tsonia nalefa mba hanerena ny governemanta sy ny Birao Mpanolotsaina ny Rakitry ny Ela mba hahatonga ilay Teatram-panjakana ho tranobe manantantara anatin'ny kilasy voalohany haroso amin'ny fivoriana ataony amin'ny Desambra. Io laharana voalohany io no atolotra ireo ”tranobe manana fahamendrehana valisoa, izay mendrika ny ezaka rehetra tokony atao mba hiarovana azy raha azo atao.” Milaza izao ny fanangonan-tsonia:
Sombiny tokana iraisam-pirenena amin'ny maritrano ilay Teatram-panjakana noho ny tafo nohamafisana hita mivaingana, izay vita amin'ny vatosokay manodidina ny tranobe, ka mahatonga azy ho mari-pamantarana an-drenivohitra mampitolagaga. Nihazona ambaratonga tsara tamin'ny maha-tena izy azy ao anatiny ao, na eo aza ny fiovàn’ ilay Teatra ho kliobana snookers tamin'ny taona 2000 — voatahiry daholo ny rafitra anatiny niandohany sy ny toerana fanaovana teatra taloha. Ity famantarana sarobidin'ny endrika malazanny fampialàna voly ny vahoaka taorian'ny ady lehibe ity dia mampahatsiahy ireo andro mamin'ny sarimihetsika tao hong Kong, ary ampiasaina ho toy ny fampahatsiahivana tsy fahita firy ny ”Shanghai kely” tany amin'ny North Point tamin'ny taona 1950 sy fiandohan'ny taona 1960. Tokony ekena sy arovana ny dikan'ny lovan'ny Teatram-panjakana.
Na dia nampanantena ny hanohana ny orinasan-tsarimihetsika ao Hong Kong sy hanangana tahirim-bola fampandrosoana ny sarimihetsika mba hanampiana amin'ny fitantanam-bola hamokarana sarimihetsika eo an-toerana aza ny governemanta ao Hong Kong, toa raharaham-barotra hafa fotsiny no fahitany ny sarimihetsik'i Hong Kong fa tsy fitaovana ara-kolontsaina entina hanakambanana ny fiarahamonina. Nandritra ny roapolo taona lasa, mari-pamantarana maro manantantara no nanome làlana amina tetikasa fampandrosoana indray. Mandrak'ankehitriny, mbola mahatsiaro marary ny vahoaka ao Hong Kong mikasika ny fandravana ny Teatra Lee Talohan'ny Ady Lehibe Faharoa tamin'ny 1991 mba hanaovana kianja ara-barotra.
Ny fampielezankevitra amin'ny fanangonan-tsonia amin'izao fotoana izao dia fitsapana iray amin'ny safidin'ny tanàna hamerina haingana ny renivola sy ny fiarovana ny kolontsainy ary ny lova ara-tantara.